သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် တော့ထားသင့်ပါတယ် ဆရာမရယ် - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် တော့ထားသင့်ပါတယ် ဆရာမရယ်
သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် တော့ထားသင့်ပါတယ် ဆရာမရယ်
Apann Pyay 11:40 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ် တော့ထားသင့်ပါတယ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတာ လက်ပါစရာမလိုပါဘူး ။ဆုံးမတာ လူလိုဆုံးမရင် လက်ခံကြမှာပါ ။အရိုက်ကြမ်းတဲ့အမက (၅)ဒဂုံအရှေ့ ပထမတန်း သင်တဲ့ဆရာမ (အားလုံးသိသွားအောင် ရှယ်ပေးလိုက်ကြပါ)
ဘေဘီဆုလေး ရဲ့ဆရာမ ပါ ကျောင်းစတက်ထဲက အဲဒီဆရာမ ရဲ့အကြောင်းကိုလဲကြားမိပါတယ်…အရိုက်ကြမ်းတဲ့အကြောင်း ဘက်လိုက်တဲ့အကြောင်းဒါပေမယ့်ဆရာမက အသင်အပြအရမ်းကောင်းပါတယ် ။ အဲဎါကြောင့်ဘေဘီဆုကိုကျောင်းမပြောင်းဘဲ အဲဒီကျောင်းမှာ ဘဲဆက်ထားခဲ့ပါတယ် ။
၆လပိုင်းလောက်ကတစ်ခါ ဆရာမရိုက်လိုက်တာ ကျောကုန်းမှာအရှိုးရာအကြီးကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါ ကလေးကို မေးကြည့်တော့ စာမရလို့ရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဆော့လို့ပါတဲ့ အဲဒီလောက်တောင်ရိုက်စရာလား စာမရလို့ရိုက်ရင် လက်ခံပါတယ် အဲဒါနဲ့ဆရာမကို တစ်အိမ်လုံးဘာမှမပြော ဆရာမကြီးကိုလဲ မပြောခဲ့ပါဘူး။
အခုတစ်ခါကတော့ တော်တော်ကိုတရားလွန်လာလို့ ကလေးကိုကျောင်းပါထုတ်ပစ်လိုက်ရပါတော့တယ် ကလေးကို မေးကြည့်တော့ တရားထိုင်တာမငြိမ်လို့တစ်ခါစာရေးတာနှေးလို့တစ်ခါဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ မြင်လို့တောင် မကောင်းပါဘူး တစ်အိမ်လုံးကလဲ စိတ်မကောင်း သူ့အဖိုးအဖွားဆိုတာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ် တာပြောမနေပါနဲ့တော့
ဘေဘီဆုလေးက သူများကလေး တွေလိုမိစုံဖစုံနေရတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာလေးတွေ ရှိပါတယ် အဲဒါကြောင့်တစ်အိမ်လုံးကသဲသဲလှုပ်လဲ
ချစ်ကြပါတယ် ဒီတစ်ခါတော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုတိုင်ရတဲ့အဖြစိ ကိုရောက်သွားပါတယ်….မကျေနပ်တာမဟုတ်ပါဘူး
နောက် ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်မိလို့ပါ…. စိတ်လဲမကောင်းပါဘူး……ကလေးကိုရိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေ ပါတင်ထားပါတယ်….အဲဒီလိုမျိုး…ဆရာမ ကို ဆရာမ လို့ခေါ်သင့်ပါသလား…ဘာဆက်လုပ်သင့်ပါသလဲ…အကြံညာဏ်များပေးနိုင်ပါတယ်…
credit to Cuttie Su Lay
သားသမီးခငျြးကိုယျခငျြးစာနာ စိတျ တော့ထားသငျ့ပါတယျ ကြောငျးသူကြောငျးသားဆိုတာ လကျပါစရာမလိုပါဘူး ။ဆုံးမတာ လူလိုဆုံးမရငျ လကျခံကွမှာပါ ။အရိုကျကွမျးတဲ့အမက (၅)ဒဂုံအရှေ့ ပထမတနျး သငျတဲ့ဆရာမ (အားလုံးသိသှားအောငျ ရှယျပေးလိုကျကွပါ)
ဘဘေီဆုလေး ရဲ့ဆရာမ ပါ ကြောငျးစတကျထဲက အဲဒီဆရာမ ရဲ့အကွောငျးကိုလဲကွားမိပါတယျ…အရိုကျကွမျးတဲ့အကွောငျး ဘကျလိုကျတဲ့အကွောငျးဒါပမေယျ့ဆရာမက အသငျအပွအရမျးကောငျးပါတယျ ။ အဲဎါကွောငျ့ဘဘေီဆုကိုကြောငျးမပွောငျးဘဲ အဲဒီကြောငျးမှာ ဘဲဆကျထားခဲ့ပါတယျ ။
၆လပိုငျးလောကျကတဈခါ ဆရာမရိုကျလိုကျတာ ကြောကုနျးမှာအရှိုးရာအကွီးကွီးတှလေို့ကျတဲ့အခါ ကလေးကို မေးကွညျ့တော့ စာမရလို့ရိုကျတာမဟုတျပါဘူးတဲ့ ဆော့လို့ပါတဲ့ အဲဒီလောကျတောငျရိုကျစရာလား စာမရလို့ရိုကျရငျ လကျခံပါတယျ အဲဒါနဲ့ဆရာမကို တဈအိမျလုံးဘာမှမပွော ဆရာမကွီးကိုလဲ မပွောခဲ့ပါဘူး။
အခုတဈခါကတော့ တျောတျောကိုတရားလှနျလာလို့ ကလေးကိုကြောငျးပါထုတျပဈလိုကျရပါတော့တယျ ကလေးကို မေးကွညျ့တော့ တရားထိုငျတာမငွိမျလို့တဈခါစာရေးတာနှေးလို့တဈခါဆိုပွီးရိုကျလိုကျတာ မွငျလို့တောငျ မကောငျးပါဘူး တဈအိမျလုံးကလဲ စိတျမကောငျး သူ့အဖိုးအဖှားဆိုတာတော့စိတျမကောငျးဖွဈ တာပွောမနပေါနဲ့တော့
ဘဘေီဆုလေးက သူမြားကလေး တှလေိုမိစုံဖစုံနရေတာ မဟုတျတဲ့အတှကျ ကလေးရဲ့စိတျထဲမှာဒဏျရာလေးတှေ ရှိပါတယျ အဲဒါကွောငျ့တဈအိမျလုံးကသဲသဲလှုပျလဲ
ခဈြကွပါတယျ ဒီတဈခါတော့ ကြောငျးအုပျကွီးကိုတိုငျရတဲ့အဖွစိ ကိုရောကျသှားပါတယျ….မကနြေပျတာမဟုတျပါဘူး
နောကျ ကလေးတှအေတှကျစိုးရိမျမိလို့ပါ…. စိတျလဲမကောငျးပါဘူး……ကလေးကိုရိုကျတဲ့ဓါတျပုံလေးတှေ ပါတငျထားပါတယျ….အဲဒီလိုမြိုး…ဆရာမ ကို ဆရာမ လို့ချေါသငျ့ပါသလား…ဘာဆကျလုပျသငျ့ပါသလဲ…အကွံညာဏျမြားပေးနိုငျပါတယျ…